फेरियो सन्दीपको दिल्लीको स्वरुप ! | Hamro Khelkud
फेरियो सन्दीपको दिल्लीको स्वरुप !
मंगलबार, फागुन २१, २०७५
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को १२ औं संस्करण मार्च २३ देखी भारतका विभिन्न सहरमा हुँदैछ । आईपीएल सुरु हुनुअघि फ्रेन्चाइज टोली दिल्ली क्यापिटल्सले नाम र लोगोपछि आफ्नो जर्सी पनि परिवर्तन गरेको छ ।
नयाँ दिल्ली को नयाँ जर्सि भन्दै सोमबार सन्दीपको अनुहार प्रयोग गर्दै दिल्लीले ट्वीट गरेको छ । गत मंसिरमा दिल्लीले आफ्नो नाम र लोगो परिवर्तन गरेको थियो । विगतमा रहेको दिल्ली डेयरडेभिल्सको नाम परिवर्तन गर्दै दिल्ली क्यापिटल्स बनाएको थियो । गत साता दिल्लीले नयाँ जर्सी सार्वजनिक गरेको थियो ।
हालसम्म आईपीएलको फाइनलसम्म पुग्न नसकेको दिल्लीले यस पटक भने उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ नाम र जर्सी दुवै परिवर्तन गरेको हुन सक्ने बुझिएको छ । यसअघि जीएमआरसँग शत प्रतिशत स्वामित्व रहेको दिल्लीको टोलीमा यस सिजन जीएसडब्लू समूहले आधा स्वामित्व लिएको छ । दिल्लीले नयाँ दिल्लीलाई नयाँ जर्सी आवश्यक भन्दै परिवर्तन गरेको हो । दिल्लीले पहिलो खेल मार्च २४ मा रोहित शर्मा कप्तान रहेको मुम्बई इन्डियन्ससँग खेल्दै आईपीएलमा सुरुवात गर्ने छ ।
नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने दिल्लीमै रहेको हुँदा विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । गत वर्ष अन्तिम तीन खेलमा मौका पाएका सन्दीपले ५ विकेट लिँदै सनसनी मच्चाएका थिए । सन्दीप हाल पाकिस्तान प्रिमियर लिग (पीएसएल) मा व्यस्त छन् । पीएसएलपछि सन्दीप आईपीएल खेल्न दिल्ली जाने छन् । आईपीएलमा सन्दीपको पारिश्रमीक २० लाख भारतीय रुपैयाँ मात्र हुने छ ।